राजेश हमाललाई प्रभाव पारेका प्रिय ५ पुस्तक
राजेश हमालका प्रिय ५ पुस्तक
June 12th, 2019 -7min read
ने पाली फिल्म क्षेत्रमा प्यारो र परिचित नाम हो– राजेश हमाल । तीन दशक भइसक्यो उनको फिल्म यात्रा । यो बीचमा उनले दर्शकको प्रेम मात्रै कमाएनन्, विभिन्न उपनाम पनि कमाए । कसैका लागि ‘राजेश दाइ’, कसैका लागि ‘शंकर’ त कसैका लागि ‘महानायक’ ।
राजेश पढ्न र घुम्न पनि औधी रुचाउँछन् । जीवनमा तपाईं एक्टर नबनेको भए के बन्नुहुन्थ्यो होला ? उनले मुस्कुराउँदै जवाफ दिए, ‘पक्कै पनि ट्राभलर बन्थेँ । घुम्ने मेरो सानैदेखिको सोख हो । र, कलाकार भएर दोहोरो फाइदा भयो । घुम्न पनि पाइयो । अभिनय गर्न पनि ।’
फूर्सद हुनासाथ पुस्तक पढ्न रुचाउँछन् । घरमा ¥याकभरी पुस्तक छन् । ‘ठ्याक्कै कुन बेला पढ्छु भन्ने छैन । मेरो ब्यागमा दुईतीनवटा पुस्तक भएकै हुन्छन् । फुर्सद भयो कि निकालेर पढिहाल्छु,’ उनले भने । उनी बढी दार्शनिक पुस्तक पढ्न रुचाउँछन् । जीवन दर्शनका पुस्तक बढी खोज्छन् ।
जीवन जीउन सिकाउने पुस्तक रोज्छन् । आत्मकथा पनि उस्तै चाखलाग्दोगरि पढ्दछन् । भन्दै थिए, ‘एउटा मान्छेको सबैभन्दा ठूलो रुचीको कुरा भनेको अर्को मान्छे हो । मान्छेको त्योभन्दा ठूलो रुची केही हुन सक्दैन । त्यसैले म सफल मान्छेका आत्मकथा पढ्न रुचाउँछु ।’
राजेश आफूले पढ्ने पुस्तक अरुलाई सेयर गर्न रुचाउँदैनन् । ‘मान्छेले कति सजिलैसँग भन्छन् क्या ‘दाई तपाईसँग त्यो बुक छ भने मलाई दिनुस् त’ । त्यतिबेला मलाई अचम्म लाग्छ,’ उनले भने ।
उनकी मधु भट्टराईसँग बिहे हुुनुअघि पुस्तकसँगै जोडिएको रमाइलो किस्सा रहेछ । उनी सम्झिँदै थिए, ‘म मेरो किताब हराएको छिटो थाहा पाइहाल्छु । पहिलोपल्ट मधु मेरो घरमा आउँदाको कुरा हो । घरबाट मलाई एकदमै मनपर्ने ‘इफ लाइफ इज अ गेम, दिज आर द रुल्स’ नाम गरेको पुस्तक हरायो । मनमा शान्ति भएन । फेरि पुस्तक हराउँदा मलाई अर्को पढ्न मन लाग्दैन । पछि मधु दोश्रो टाइम घर आको बेला पुस्तक हरायो भनेर सुनाउँदा उसले मैले लगेको थिएँ भनेपछि पो चकित परें ।’
उनलाई प्रभाव पारेका प्रिय ५ पुस्तक उनकै शब्दमा ः
इफ लाइफ इज अ गेम, दिज आर द रुल्स
न्यूयोर्क टाइम्सकी लेखक चेरी कार्टर–स्कोर्टले लेखेको पुस्तक हो यो । उनी लाइफ कोच पनि हुन् । यदि जीवन एउटा खेल हो भने पक्कै राम्रो खेल खेल्न नियमहरू हुन्छन् । ति नियम के हुन् त ? जीवनमा आइपर्ने चुनौती र उत्तरचढाव कसरी सामना गर्ने त ? पुस्तकले यस्तै कुरा सिकाउँछ । जीवन जिउन सिकाउँछ यो पुस्तकले । मान्छे भनेको एकदमै प्रतिक्रियावादी हुन्छ । आफूलाई सहि ढंगले विश्लेषण गरेर अघि बढ्न सकिरहेको हुँदैन । यी सब कुराका टिप्स पुस्तकमा छ ।
मोर पोजिटिभ थिंंकिङ
मलाई अर्को प्रिय लाग्ने पुस्तक हो – ‘मोर पोजिटिभ थिंकिङ ः हाउ टु क्रिएट अ फ्यूचर फर योरसेल्फ’ । भेरा पाइफरले लेखेको पुस्तक बाहिरबाट हेर्दा निकै सरल देखिन्छ । तर भित्र निकै गहकिला कुरा छन् । जीवनलाई सार्थक र सुन्दर बनाउन मान्छेले कसरी आफूमा सकारात्मक सोच विकास गर्नुपर्छ ? पुस्तकमा प्रिय ढंगले उतारिएको छ । जीन्दगीमा अप्स एन्ड डाउन्सहरू धेरै हुन्छन् तैपनि कसरी माथि उठ्न सकिन्छ, कसरी जीवनप्रति सकरात्मक योजना बनाउन सकिन्छ, जीवनका लक्ष्यहरू कसरी पूरा गर्न सकिन्छ भन्ने पुस्तकले सिकाउँछ । ममा सकरात्मक सोच विकास गराउन यो पुस्तकले उपयोगी भूमिका खेलेको छ ।
बेनजिर भुट्टो ः डटर अफ डेस्टिनी
मलाई मान्छेको जीवनप्रति एकदमै रुची लाग्छ । मैले पढेका आत्मकथामध्ये पाकिस्तानी राजनीतिज्ञ बेनजिर भुट्टोको आत्मकथा मनपरेको हो । उनका जीवनका किस्साहरू, उत्तरचढावहरू साँच्चै चाखलाग्दा छन् । हरेक मान्छेको जीवनसँग केही न केही सिक्ने कुरा हुन्छ । भित्रबाट खोतल्ने हो भने हरेक मान्छे आफंैमा एउटा पुस्तक हो । उसका केही कुरा हाम्रो जीवनसँग पनि मेल खाइरहेको हुनसक्छ । मान्छेले जीवनमा कतिपय कुरा व्यक्त गर्न सकिरहेको हुँदैन तर त्यही कुरा अरुको जीवन पढ्दा आइरहेको हुन्छ । जसकारण उसलाई अरुको जीवनले छुन्छ, त्यहाँ उसले आफूलाई पनि पाउँछ । मान्छे एउटा परिस्थिती र विन्दु लिएर जन्मिएको हुन्छ तर ५० वर्ष भइसक्दा उ कुन विन्दुमा पुग्छ उसलाई नै थाहा हुँदैन । बेनजिर राजनीतिक परिवारमा हुर्केकी महिला हुन् । उनका बुबा पनि राजनीतिज्ञ थिए जसलाई जेलमा मृत्युदण्ड दिइएको थियो । उनी र परिवारसँग जोडिएका उत्तरचढाव पुस्तकमा छन् । जीवनमा आइपरेका चुनौतीहरूलाई उनले कसरी सामना गरिन् ? त्यो पनि पुस्तकमा उल्लेख छ । जीवन त सबैको चुनौतीपुर्ण नै हुन्छ । तर चुनौतीलाई उसले कसरी सामना ग¥यो त्योचाँही महत्वपूर्ण हुन्छ ।
मैले पढेका नेपाली पुस्तकमध्ये एकदमै मनपरेको हो– ‘कर्नाली ब्लुज’ । बुद्धीसागरले लेखेको यो किताबको भाषा र प्रस्तुती मीठो छ । किताबमा लेखकले जुन परिस्थिती र परिवेश चित्रण गरेका छन् त्यो वास्तविक लाग्छ । लेखाई एकदमै मनप¥यो । उसले एउटा टेबलमा कप छ भने त्यसको मात्रै चर्चा गर्दैन, त्यहाँ चम्चा कसरी बसेको छ, वरिपरिका मान्छे कसरी बसेका छन् लगायत सम्पुर्ण परिवेश उतारेको छ । लेखाईमा कल्पना भएपनि भोगाई र भावना झल्किएको छ । त्यसो भएपछि हरेक पाठकले यस्ता पुस्तकलाई आफ्नो जीवनसँग लिंक गरेर पढ्छ ।
हाउ टु मेडिटेट
दिमागमा हरेक दिन हजारौँ सोच आउँछन् । अनेक सोच्छ मान्छे । सोच त हाम्रो कन्ट्रोलमा हुँदैन तर कुन सोचाईबाट परिचालित हुने त्योचाँही हाम्रो कन्ट्रोलमा हुनसक्छ । दिमागमा त उट्पट्याङ र खराब सोच पनि आउँछन् । तर त्यस्तो सोचलाई तत्काल डिलिट गरिहाल्नुपर्छ । मेडिटेटसनले कुन सोचबाट आफू परिचालित हुने त्यो सिकाउँछ । सोच त सन्तको पनि त्यही हो, बाटोमा हिँड्ने मान्छेको पनि । लारेन्स ले सानले लेखेको यो पुस्तक संसारभर एकदमै धेरै विक्री भएको छ । मेडिटेट कसरी गर्ने भन्ने टिप्स यो पुस्तकमा छ । यो पुस्तकलाई ‘द एक्लेम्ड गाइड टु सेल्फ डिस्कोभरी’ अर्थात् आत्मखोजका लागि प्रशंसित पुस्तक पनि मानिएको छ ।